Muraayada, Farshaxanka iyo Farshaxanka Warshada Soo saarta-SHUNDA - gidaarka dhejiska ah ee alwaax alwaax ah Shelf alwaax sabbeynaysa alwaaxyo sabbaynaya kaydinta muujinta Shelf gidaarka qurxinta OEM iyo warshad | SHUNDA
PVC alwaax ah Ku soo dhawoow Seahorse Animal Beach Sign, ...
Warshada Shiinaha Saddex-geesood oo Qaabaysan gidaarka Xadhig alwaax ah Sawirka ...
Qiimaha Wanaagsan ee Zinc Alloy Birta Samaynta Agabka Birta...
Silig Tayo Sare leh oo leh Dahaarka birta laablaaban ee laablaaban...
Tuwaalada Waraaqda Madow ee Ku-haysta Baska oo leh shelf Jikada D...
Sanduuq weyn oo alwaax ah oo la dhammeeyey oo leh daboolka hore iyo Cl hore
5pcs wajiga moon dhigaya shelf qoryo moon wareegga derbiga Shel ...
Sanduuqa hadiyadda daboolka daboolka silbashada alwaax
Qoryaha dhibicda leh ee gidaarka leh Shelf alwaax sabbaynaysa...
Qalfoofka Dayaxa ee gidaarka leh oo leh muraayad bir alwaax ah...
China OEM Box Rectangular Manufacturers ̵...
Shiinaha OEM alaab-qeybiyeyaasha shelf - alwaax ...
Shiinaha OEM labalaab alaab-qeybiyeyaasha shelf moon - darbiga...
Shiinaha OEM Alaabada Sanduuqa Qurxinta Qoryaha - Darbiga...
Shiinaha OEM gidaarka alaab-qeybiyeyaasha shelf - Woo...
Shiinaha OEM Sanduuqa hadiyadda hadiyadeed ee alwaax - moodada ...
Shiinaha OEM Sanduuqa Qurxinta Qoryaha - Qoryaha ...
Shiinaha OEM Wershadaha shelf ee gidaarka laadlaadsan - Res...
Alwaax dhibco leh oo gidaar ku dhejisan Shelf alwaax sabbaynaya Shalfado ka laadlaad Muujinta Qurxinta gidaarka
* Soo dhawoow habaysan*
Tilmaamo cajiib ah:
Farsamada gacanta lagu sameeyo,Eco-saaxiibtinimo
Naqshad godan oo badan, ayaa lagu dhejin karaa ama lagu dhejin karaa walxaha yaryar ee qurxinta
Badbaadada iyo Raaxada Isticmaalka
Waxaa loo isticmaali karaa qolka fadhiga, waxbarashada, qolka jiifka, xafiiska, daaqadaha iwm
Isticmaalka shaqo badan, si loo abuuro guri moodada ah
Midabka Waa la beddeli karaa
Dhumucda 0.8mm, 10mm, 12mm, iwm
Waqtiga dirida Qiyaastii 10 maalmood oo shaqo kadib markii la helo deebaajiga
Mudada lacag bixinta TT, paypal,veem, Escrow, midowga galbeed, lacag caddaan ah, iwm
Raritaanka By Air, by Sea, by Express (DHL, TNT, UPS, EMS, Fed Ex)
Aqoon-is-weydaarsi & Khadka Wax-soo-saarka
1. OEM & ODM, Muraayadaha kasta waxaa lagu habeyn karaa midab, cabbir.
2. Weydiintaada ku saabsan alaabtayada ama qiimayaashayada waxa lagu jawaabi doonaa 1 saacadood gudahood.
3. Tayada ugu Wanaagsan, Qiimaha tartanka iyo Bixinta Waqtiga.
Warshadda Qurxinta Guriga ee Shunda waa shirkad bixisa muraayadaha oo xirfadle ah oo bixisa wax soo saarka, nashqadaynta, iibka iyo adeegga iibka kadib macaamiisha caalamka. Shirkadeena waxay diiradda saartaa soo saarista iyo naqshadaynta dhammaan noocyada wax soo saarka muraayadaha sida muraayadda wareegsan, muraayadda dayaxa badhkeed, muraayadaha muraayadaha iwm.kuwaas oo si weyn looga isticmaalo Guriga, dhismayaasha xafiisyada, suuqyada laga dukaamaysto, suuqyada waaweyn, dugsiyada, mashruuca hoteelada, waxaanu sidoo kale bixinaa adeegyada ganacsiga OEM iyo ODM.
Alaabooyinka tayada sare leh, tartanka qiimaha leh iyo adeegga ugu fiican ayaa ah raadintayada aan joogsiga lahayn. Gaadhi waayo-aragnimo xagga wax-soo-saarka muraayadda iyo dhoofinta rumaysta waxay ku siin kartaa khibrad iskaashi oo wanaagsan. Iyada oo hufnaan cusub leh, qaabab kala duwan iyo adeeg feker leh,alaabtayadu waxay ku guulaysteen kalsoonida iyo kalsoonida macaamiisheena, Fiiri fariintaada oo ku soo dhawow Shiinaha.
1. S: Ma waxaad tahay warshad ama shirkad ganacsi?
J: Warshada. Waxaan ku dadaaleynaa inaan noqono wax soo saarka ugu fiican ee qurxinta guriga Farshaxanka iyo warshadaha farsamada iyadoo loo marayo hal-abuurnimo, xirfad, tayo iyo qiimo tartan leh.
2. Ma heli karaa warqad muunad ah oo loogu talagalay iftiinka ledhka?
J: Haa, waanu soo dhawaynaynaa dalabka muunada si loo tijaabiyo oo loo hubiyo tayada. Muunado isku dhafan waa la aqbali karaa.
3. sideen u dammaanad qaadi karnaa tayada?
Had iyo jeer Kormeerka ugu dambeeya ka hor inta aan la rarin;
4. S: Waa maxay shuruudaha lacag bixinta?
A: TT, paypal, veem, Western Union, Escrow, lacag caddaan ah, iwm
5.Q: Waa maxay shuruudaha bixinta?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDP iyo qaar ka mid ah shuruudaha kale ee macmiilku u baahan yahay.
6. Ma jirtaa qaab lagu dhimi karo qiimaha maraakiibta ee dalkeena?
J: Amarrada yaryar, muujinta ayaa noqon doonta tan ugu fiican; Dalabka badan, gaadiidka badda ayaa noqon doona doorashada ugu fiican marka la eego wakhtiga rarida. Sida amarrada degdegga ah, waxaan si naxariis leh u soo jeedinaynaa gaadiidka hawada iyo adeegga geynta guriga waxaa la siin doonaa foomka shuraakadayada markabka.
Hore: Shelf Dayaxa Dabiiciga ah oo gidaar leh oo leh muraayad Alwaax dhabarka loo saaray Sabbaynaysa shafka leh muraayada Laadlaad ee Kaydinta Muujinta Qurxinta gidaarka qolka fadhiga
Xiga: Raaxada Cas ee Crown Crane Qaabka Miiska Miiska Iftiinka
*Ku soo dhawoow muraayad qaab kasta oo loo habeeyey*
Farsamada gacanta lagu sameeyo
Hadiyad ku habboon qoysaska iyo asxaabta iyo sidoo kale qurxinta farshaxanka wanaagsan
Guryaha shimbiraha ee alwaax ah DIY Farshaxan Farshaxan alwaax ah 3D Pai...
Silig Tayo Sare leh oo leh Dahaarka Birta laalaaban ee...
Gidaarka Dayax laba jibaaran yahay Shelf alwaax sabbaynaysa...
Dabool alwaax ah oo simbiriirixan oo weyn oo aan dhammayn Sanduuqa Qoryaha
Muujinta Sawirka gidaarka Xadhig alwaax ah oo saddex gees leh
Qaabka bisadaha gidaarka leh ee Shelf alwaax sabbaynaya S...